Coursecom ဆိုတာ ဘာလဲ ? (What is Coursecom?) – Coursecom
Coursecom ဆိုတာ ဘာလဲ ? (What is Coursecom?)
နည်းပညာတွေမြင့်မားလာတဲ့ ယနေ့ခေတ်ကြီးမှာလူငယ်တွေဟာ ယခင်ကလို ပညာရပ်တခုခုကို လေ့လာဖို့ သင်ယူဖို့ အတွက် သင်တန်းတစ်ခုထဲကိုပဲ အာရုံစိုက်မနေကြတော့ပါဘူး ။ ။ ။ ။ ။ 🕵️‍♀️
သင်တန်းတစ်ခု တက်ဖို့ဆိုတာ အချိန်၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု ၊ သွားလာရေးစတဲ့ များစွာသော အနှောင့်အယှက်တွေရှိပါတယ်။ ။ ။ ။ ။ 😩
အစရှိတဲ့ အနှောင့်အယှက်တွေကို ဖယ်ရှားပေးပြီး မိမိသင်လိုတဲ့ ပညာရပ်တစ်ခုကို စိတ်တိုင်းကျ ၊ လွယ်ကူစွာနဲ့သက်တောင့်သက်သာ ၊ စမတ်ကျကျ သင်ယူနိုင်ဖို့ အဆင့်မြင့် Online Education Platform တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Course.com.mm နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ။ ။ ။ ။🛰🛰
🌲Coursecom ဆိုတာ ဘာလဲ ? ? ?
Coursecom ဆိုတာ မိမိသင်ကြားလိုတဲ့ ဘာသာရပ်များ​ကို အ​​ခြေခံမှစ၍ Management Level အထိ စိတ်​ကြိုက်​​ရွေးချယ်​ ​လေ့လာနိုင်​ပြီး၊ ထိုဘာသာရပ်တွေကို စာတွေ့လက်တွေ့ အတွေ့အကြုံရှိသည့်အပြင်၊ သင်ကြားရေးပိုင်းမှာပါကျွမ်းကျင်သော ဆရာ/ ဆရာမ များမှ အွန်လိုင်းကနေတဆင့် သင်ကြားပေးနေတဲ့ Platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ။.
🌲ဘာတွေသင်တာလဲ ? ? ?
အခမဲ့သင်ခန်းစာတွေကနေစလို့ ၊ Certificate သင်ခန်းစာတွေအပြင် Professional သင်ခန်းစာတွေ ၊ အလုပ်အကိုင်တွက် ပါ အာမခံပေးနိုင်မဲ့ Job Guarantee သင်ခန်းစာတွေကို သင်ကြားပေးပါတယ် ။
🌲ဘယ်လို ဘာသာရပ်တွေပါလဲ ? ? ?
အစရှိတဲ့ ဘာသာရပ်တွေကို သင်ကြားပေးတာကြောင့်မိမိဝါသနာပါတဲ့ မည်သည့် ဘာသာရပ် ၊ ပညာရပ်မဆို ၀င်ရောက် သင်ယူ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ။ ။ ။ ။ ။
🌲ဘယ်လိုသင်တာလဲ? ? ?
အတွေ့အကြုံရှိ ဆရာများမှ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ သင်ရိုးတွေကို ဗီဒီယို ဖိုင်များ နှင့် စနစ်တကျ ရှင်းလင်းသင်ကြားထားတဲ့အပြင် Live Chat နဲ့ သင်ကြားခြင်း၊ Group Discussion များ ပြုလုပ်စေခြင်း၊ တကယ်ထိရောတဲ့ Exam Test တွေ ပြုလုပ်စေခြင်းကြောင့် တကယ့်အတွေ့အကြုံကောင်းတွေ နည်းစနစ်ကောင်းတွေကို သင်တန်းတက်သကဲ့သို့ ရရှိနိုင်အောင် သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ် ။ ။ ။ ။
🌲ဘာသာစကား အခက်ခဲရောရှိလား ? ? ?
ဘာသာစကားအခက်အခဲမရှိအောင် Local Language နဲ့ သေချာစနစ်တကျ စီစဉ်ထားလို့ ဘယ်ဘာသာရပ်ကိုမဆို အခက်ခဲမရှိ
အားလပ်ချိန်မှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် လွယ်ကူစွာ သင်ယူနိုင်ပါတယ်။ လွယ်ကူလျှင်မြန်သော Online နည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီး
မိမိလေ့လာလိုသော နည်းပညာအသစ်များ၊ ဘာသာရပ်အသစ်များကို မည်သည့်နေရာတွင်မဆို အချိန်အနည်းငယ်ရှိရုံဖြင့်
ဒါကြောင့် သင်တန်းတက်ဖို့ အချိန်မရှိလို့ ၊ ပင်ပန်းလို့ ၊ သွားလာရေး မလွယ်လို့ စိတ်ညစ်စရာမလိုတော့ပါဘူး …..👍👍
မိမိအိမ် .. ရုံး .. အလုပ်ကနေ လွယ်ကူ .. လွတ်လပ်စွာသင်ယူဖို့
Course.com.mm ကို ၀င်ရောက်လေ့လာလိုက်ပါ
0 responses on "Coursecom ဆိုတာ ဘာလဲ ? (What is Coursecom?)"